Orogoay · Global Voices teny Malagasy
Tantara misongadina mikasika ny Orogoay
Fahalalahàna miteny29 Desambra 2020
Arzantina29 Jona 2020
Ny raharaha emoji mate sy ny maha-zavadehibe izany ho an'i Amerika Atsimo
Arzantina21 Desambra 2018
Tantara mikasika ny Orogoay
Tonga hatrany Amerika Atsimo ny setroka avy tamin'ny afo tany Aostralia
Aostralia 21 Janoary 2020
Namakivaky ny Oseana Pasifika mirefy 12.000 kilometatra ny setroky ny afo be tany Aostralia.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 04 Janoary 2019
Brezila 31 Oktobra 2018
Arzantina 30 Oktobra 2018
Brezila 30 Oktobra 2018
Orogoay: Mampiely ny Karnavaly manerantany ny aterineto
Mediam-bahoaka 22 Mey 2018
Noho ny aterineto sy ny media sosialy, fa azon'ny Orogoaiaina monina ivelan'ny firenena atao ny mijery ny karnavaly ary azon'ny mpizahatany latsa-pitiavana amin'ity fankalazana maharitra efapolo andro ity koa ny mijery izany.
Però 18 Mey 2018
Ny alin'ny 5 Septambra 2007, nanam-bintana izahay nanatri-maso ny "hydrométéore" iray nanana endrika tsy fahita firy antsoina hoe "prisme de glace". Io tranga tsy fahita firy io dia firotsahana kristalin-dranomandry miendrika fanjaitra, kioba na tsanganana, amin'ny ankapobeny dia toy ny mihantona eny amin'ny rivotra.
Afrika Mainty 17 Mey 2018
Nandray voalohany ny fiadiana ny amboara erantany amin'ny baolina kitra, izay azo lazaina fa ilay hetsika ara-panatanjahantena manerantany malaza indrindra ny kaontinanta Afrikana.